विमोचनकाे निम्तोमा जाने तयारी – मझेरी डट कम
“ए भाइ, आज बेलुका आठ बजे होटल हेरिटेजमा मेरो कृतिविमोचनको कार्यक्रम छ, कसै गरी आउनु पर्छ है । ठिक समयमा आउनुहोला । बेलुकाको खान र पानको लागि पनि होटलमै बन्दोबस्त छ । सदम्पतीलाई नै निम्तो गर्छु भ्याउँदिन भन्न पाइन्न नि !”
“थुक्क !! अलिक पहिले निम्तो भएको भए ता यो भातसात नपकाई दिउसो भरि हविख्खे बसेर वा भोकभोकै गएर लुँड्याइन्थ्यो नि, क्या ब्याडलक परेछ भन्नेसम्म लाग्यो । खैर जे होस् । भरे दिउसो खाजा चैं नखाई जाने” यसरी निम्तोबारे अठोट गरें मनमनै अठोट गरें।
“कृतिको प्रकाशन गर्नुभएकोमा बधाई छ दाजु । हुन्छ दाजु हुन्छ, हामी आउँछौं दस थरी काम बितार पनि आउँछौं नि अब दाजैकै कृति नै प्रकाशन गर्ने भएपछि । कताकता केकेको लेठो छ तैपनि अब हजुरले नै निम्ता गरेपछिलाई नआउनु पनि कसरी ?” यसरी उहाँलाई उत्तर दिएँ र सुर कसें विमोचनको कार्यक्रममा जाने तयारीको बन्दोबस्तीतर्फ । बिहानका खानका कुरा सकिएर बेलुकाको सुरसार गर्ने सोच भात टोकिनसक्तै आउन सक्छ । यसैले अलिक फकाएर गृहमन्त्रीलाई भनेः
“आज बेलुकाको भोजन बनाउने लेठो परेन नि बुझ्यौ !! खाजा पनि खाने हैन, घरमा नबनाउनू । कतै सित्यै पाइहालियो भने खाने हो पैसो खर्च गरेर नास्तासास्ता खाने काम छैन अब आज । पानीसम्म खानु पर्ला तेति हो ।” यसरी श्रीमतीलाई अराउँदै होटल हेरिटेजमा कृति विमोचनको भतेर खान जाने सुवर्ण अवसर जुरेको सुनाएँ । उनी ता खुसीमाथि तीन खुसी भइन् । बल्लबल्ल होटलमा गरिने विमोचनको भतेर वा पार्टीमा जाने अवसर परेको छ जो । अब मेरो आजको कतै जाने कार्यक्रम स्थगित नैं भो किनभने होटलमा जानु न छ ।
उनका लागि तुरुन्तै ब्यूटी पार्लरमा गएर कपालमा कालो लगाउने वा घरमै लगाउने भन्ने समस्या परेको देखियो । ‘यसो थ्रेडिङ पनि नगरेको कति भो ! कपाल काट्न पानी पाएको हैन । आधीसरो फुलिसकेको छ ।’ उनको निकै दिनको गनगन सुनेकै हो । मैले समाधान गर्दै भनिदिएँ “जाने नि ब्यूटीपार्लरमा कसले दुःख गरिरहोस् घरमा । शृङ्गार समेत उतैबाट गरेर आउने । बरु भरसक केही नखाई पेट खाली नै राखिछाड्नू । कि कसो ?”
“हुन्छ नि त !” उनको उत्तर थियो ।
अब प्वालै प्वाल परेको लुगो भए पनि अरु कुरामा म्याचिङ्को मेलो मिलाउनै पर्यो । ती सबै कुराहरू मिलाउँदा र लाउँदा ओर्दा अरु केही घन्टा लाग्यो मेरी उनीलाई । कहिले यो फुर्को मिलेन भनेको छ ऐनाका अघि बटारिएर हेरेको छ, कहिले उता के मिलेन भनेको छ र झर्किएको छ । कहिले टीका बाङ्गो लाग्यो भनेको छ र फेरेको छ, कहिले लिप्स्टिक लाएको छ, कलर नमिलेको कारणले पुछेको छ । बेला बेला नमिलेको टेन्सनमा मलाई गाली पनि गरेको छ । कहिले नाभीमा लुर्को झुन्डाएको छ अनि कहिले केकेके । म पनि बडीगार्डको जस्तो भएर उनको लुगा र केकेकेजाति मिलाउन लागेको छु । जुताका साथ लुगा लगाएर हिंड्ने रिहर्षल गरेकी छिन् । मिलेको नमिलेको कुराको जजमेन्ट मैले गर्नु परेको छ । बडो हम्मेहम्मे पर्यो उनको समग्र कुरा मिलाउन र लाउन । लगभग तीन घन्टे परिधान पहिरनको कास्टिङ सहितको कार्यक्रम सकिएपछि अब फोटो सेसनको बेला थियो । विभिन्न पोजका केही फोटाहरू खिचिदिएँ । त्यसमा पनि कहिले यो मिलेन र कहिले त्यो मिलेन भनेको छ । मेरो लोत काडिएको छ । केही बोल्नुभएको छैन । जसो भन्यो उसैउसै मात्र गर्दै गएँ । बल्ल केही फोटाहरू पास भए र ती पास भएका खिचिएका फोटाहरू उनले तुरुन्तै फेसबुकमा अपलोड गरिन् । अनि त्यसमा “क्याप्सन लेखिदिनू त !!” भनेर मतिर आदेश गरिन् । मैले यथोचित क्याप्सन लेखिदिएँ । क्याप्सनमा चित्त बुझे ता मरिजाऊँ । चित्त नबुझेकोले केही समय त्यसलाई परिष्कार गरिरहें । कसै गर्दा पनि चित्त बुझेन । “लौ हेर पढेलेखेको मान्छेहरुको हालत !!” साधारण गाली पनि खाइरहेको छु । नाक खुम्चिँदै छ तर अन्तमा उनको केही लागेन । आफू लेख्न नजाने पनि पतिलाई राम्रै कक्षा लिएकी छिन् भन्ने लागिरह्यो । अलिक गतिलोसँग लेखपढ गर्न नजान्नेलाई पनि लेखाइ चैं राम्रो चाहिने रहेछ भन्ने लाग्यो । बल्ल उनले सेएर गरिन् अनि लाइक र कमेन्टको प्रतीक्षा गर्न थालिन् ।
“ए ज्या, लौ हेर यो मान्छे !! केही सम्झाउनु छैन ।” उनले केही ठुलै कुरा बिर्सेको जसरी मलाई झस्काइन् । कारण रहेछ पर्फ्युम चयनको । ड्रेसिङ टेबुलमा भए भरको चेक पछि बल्ल फगमा मन बुझेको थाहा भो र यो फाल पनि सकियो ।
मैले पनि यसो केही पुराना लुगालाई तानतुन पारेर भिरें । भन्न त भन्दै थिइन् “यसो मेरा अघि मेरो इज्जतका लागि भए पनि थ्री पिससँग टाइ पनि लाउनु नि । यो मान्छेसँग मैले सकिन । के मान्छेका पाला परिएछ बा ।” मनमनमा “तिमी नाङ्गै र च्यातिएका लुगा लगाएर आङ् देखार हि‌ड्दा हुने, मैले थ्रीपिस लाउनु पर्ने !!” भनेर भनौ कि भन्ने लाग्यो, फेरि सातो खालिन् भनेर चुप लग्दै जेसुकै होस्र् भनेर उनलाई टिपेर लागें होटलतिर ।
अचम्म लाग्यो । कुनै सभाहरुमा प्रमुख अतिथि नआएर सभा थाल्नै नपाई ढाक्रे भएर सबै आगन्तुक अरकच्च पर्छन् र सभा नै हुन्न अनि यहाँ भने तोकिको समयभन्दा पनि अघि नै पो कार्यक्रम सुरु भई थालिने समयमा सकिन लागेछ । के हो हँ कारणा ! हामी पुग्नु अगावै कार्यक्रम मध्यान्तर हुन लागिरहेको रहेछ । यसो कुरा बुझ्दा प्रमुख अतिथिलाई खाली खाल्सा गरिदिन अलिक अघि नै सभा थालिएछ । उहाँ ठेकाको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि हतारिनु भएको रहेछ । हो गाणतन्त्र आएपछि यसरी समयलाई बचत गरिन्छ बुझ्यौ त केटा हो भन्न मनमा लाग्यो । “अचेल ठेकाको स्वीकृति मध्यराति हनिमुन मनाएको शैलीमा गरिएन भने मार्छन् झ्याम्लेले । यही सोचेर वा गाणतन्त्रको महान् अभियानले हो पैसाको लेनदेन र ठेकापट्ठा रातारात हुन थालेका छन् ।” नजिकै बसेका एक जना मित्रले मेरा कानमा फुस्फुसाउनु भो । मैले यसबारे सोच्नु मनासिब ठानिन । प्रमुख अतिथिको महावाणी जो आइरहेको थियो तिनका अमृतवाणी नसुनेर कसले सुनोस् यी कुरा ।
थाहा हुँदै गो सभापतिले आसन ग्रहण गरेछन् । प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि साधारण अतिथि अतिथिनीहरू सबै मञ्चमा अघि नै चढिसकेछन् । कृतिविमोचन अघि नै भइसकेछ । तल्लो दर्जाकाहरुको भाषणको पालो अघि नै पुगेछ र म अहिले प्रमुखको भाषण चुहाउने बेला पे भइसकेको रहेछ । म ता बल्ल पो आँखा पुगे “कृतिकार श्रीअर्पणानन्दको ‘पुरुषहरुबाट नारीमाथि दमन र थिचोमिचो’ नामक कृतिको लोकार्पण कार्यक्रम” लेखिएको तुल झललल टल्किरहेको थियो । मेरा भने पत्नीज्यूको तयारी पर्नु पूर्वको कैरन मनभरि हुरुरुरु सल्किरहेको थियो ।